Soosaarayaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha Qalabka - Qalabka Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida
Laab Qaboojiye Laab Muraayad Aluminium ah
YB Chest Freezer Glass Door with Aluminium Handle waxay isticmaaleysaa 4mm muraayad dulsaar ah oo heerkulkiisu yahay Low-E muraayad ah, taas oo ah shil kahortaga, astaamaha qarxa oo adkeysanaya muraayadda baabuurta Waxay la kulmi kartaa shuruudaha heerkulka laga bilaabo -30 ℃ ilaa 10 ℃. Waxyaabaha jirku waa PVC-nimo ku habboon deegaanka cuntada. U jiido bidix-midig waa noocayaga caadiga ah, qufulka iyo nalalka LED-ka ayaa ikhtiyaari ah.
Sariirta Laab Talaajadda Muraayadda Albaabka
YB Sliding Chest Freezer Glass Door waxay isticmaaleysaa muraayad 4mm sabaynaysa muraayad Low-E muraayad ah, taas oo ah shil kahortaga, cadeyn qarax iyo adkeysiga muraayadda gawaarida. Waxay la kulmi kartaa shuruudaha heerkulka laga bilaabo -30 ℃ ilaa 10 ℃. Qalabka jirku waa mid u roon bay'adda u wanaagsan cuntada darajada 'PVC' oo leh geeska ABS, albaab irbad oo dhameystiran ayaa sidoo kale la bixin karaa si loo buuxiyo baahidaada asaliga ah. Hoos u rog-hoos-u-dhig ama bidix-midig waa noocayaga caadiga ah, qufulka iyo nalalka LED-ka ayaa ikhtiyaari ah.
Jasiiradda Qaboojiyaha Muraayadaha
YB Island Friza Glass Door waxay isticmaaleysaa muraayad 4mm oo kor u kacsan oo muraayad Low-E ah, taas oo ah shil kahortaga, qarax-cadeyn la'aanta muraayadda gawaarida. Waxay la kulmi kartaa shuruudaha heerkulka laga bilaabo -30 ℃ ilaa 10 ℃. Qalabka jirku waa mid u roon bay'adda u wanaagsan cuntada darajada 'PVC' oo leh geeska ABS, albaab irbad oo dhameystiran ayaa sidoo kale la bixin karaa si loo buuxiyo baahidaada asaliga ah. Hoos u rog-hoos-u-dhig ama bidix-midig waa noocayaga caadiga ah, qufulka iyo nalalka LED-ka ayaa ikhtiyaari ah.
Laab Laabid Qaboojiyaha Albaabka
YB Chest Freezer Sliding Door waxay isticmaaleysaa muraayad 4mm oo la cusbooneysiiyay oo muraayad u ah Low-E muraayad, taas oo ah shil kahortaga, astaamaha qarxa ee adkeysiga muraayadda gawaarida. Waxay la kulmi kartaa shuruudaha heerkulka laga bilaabo -30 ℃ ilaa 10 ℃. Qalabka jirku waa mid u roon bay'adda u wanaagsan cuntada darajada 'PVC' oo leh geeska ABS, albaab irbad oo dhameystiran ayaa sidoo kale la bixin karaa si loo buuxiyo baahidaada asaliga ah. Hoos u rog-hoos-u-dhig ama bidix-midig waa noocayaga caadiga ah, qufulka iyo nalalka LED-ka ayaa ikhtiyaari ah.
Laabta Talaajo Flat Muraayad Albaabka
YB Chest Freezer Flat Glass Door wuxuu isticmaalayaa 4mm muraayad dulsaar ah oo muraayad u ah muraayadda Low-E, taas oo ah shil kahortag, qarax-cadeyn la aan adag oo muraayad baabuur. Waxay la kulmi kartaa shuruudaha heerkulka laga bilaabo -30 ℃ ilaa 10 ℃. Qalabka jirku waa mid u roon bay'adda u wanaagsan cuntada darajada 'PVC' oo leh geeska ABS, albaab irbad oo dhameystiran ayaa sidoo kale la bixin karaa si loo buuxiyo baahidaada asaliga ah. Hoos u rog-hoos-u-dhig ama bidix-midig waa noocayaga caadiga ah, qufulka iyo nalalka LED-ka ayaa ikhtiyaari ah.
Laab Qaboojiyaha Mishiinka Muraayadda Albaabka
YB Chest Freezer Sliding Glass Door wuxuu adeegsanayaa muraayad 4mm oo la cusbooneysiiyey oo muraayad u ah Low-E galaaska, taas oo ah shil kahortag, qarax-caddeyn adag oo leh muraayada hore ee baabuurta. Waxay la kulmi kartaa shuruudaha heerkulka laga bilaabo -30 ℃ ilaa 10 ℃. Qalabka jirku waa mid u roon bay'adda u wanaagsan cuntada darajada 'PVC' oo leh geeska ABS, albaab irbad oo dhameystiran ayaa sidoo kale la bixin karaa si loo buuxiyo baahidaada asaliga ah. Hoos u rog-hoos-u-dhig ama bidix-midig waa noocayaga caadiga ah, qufulka iyo nalalka LED-ka ayaa ikhtiyaari ah.
Qaloocsan Muraayad Albaab Albaabka
YB Curved Sliding Glass Door waxay isticmaaleysaa muraayad 4mm sabaynaysa muraayad Low-E ah, taas oo ah shil kahortaga, qarax-cadeyn la'aanta muraayadda gawaarida. Waxay la kulmi kartaa shuruudaha heerkulka laga bilaabo -30 ℃ ilaa 10 ℃. Qalabka jirku waa mid u roon bay'adda u wanaagsan cuntada darajada 'PVC' oo leh geeska ABS, albaab irbad oo dhameystiran ayaa sidoo kale la bixin karaa si loo buuxiyo baahidaada asaliga ah. Hoos u rog-hoos-u-dhig ama bidix-midig waa noocayaga caadiga ah, qufulka iyo nalalka LED-ka ayaa ikhtiyaari ah.
Flat Laabta Talaajo Muraayad Albaabka
YB Flat Chest Freezer Glass Door waxay isticmaaleysaa muraayad 4mm sabaynaysa muraayad Low-E muraayad ah, taas oo ah shil kahortaga, cadeyn qarax iyo adkeysiga muraayadda gawaarida. Waxay la kulmi kartaa shuruudaha heerkulka laga bilaabo -30 ℃ ilaa 10 ℃. Qalabka jirku waa mid u roon bay'adda u wanaagsan cuntada darajada 'PVC' oo leh geeska ABS, albaab irbad oo dhameystiran ayaa sidoo kale la bixin karaa si loo buuxiyo baahidaada asaliga ah. Hoos u rog-hoos-u-dhig ama bidix-midig waa noocayaga caadiga ah, qufulka iyo nalalka LED-ka ayaa ikhtiyaari ah.
Ice Cream Laabta Talaajo Curved Top Sliding Glass Albaabka
YB Ice Cream Laabta Talaajo Curved Top Sliding Glass Door wuxuu isticmaalayaa 4mm sabayn dulqaad leh oo qabow Low-E galaaska, taas oo ah shil kahortaga, qarax-cadeyn la'aanta muraayadda gawaarida. Waxay la kulmi kartaa shuruudaha heerkulka laga bilaabo -30 ℃ ilaa 10 ℃. Qalabka jirku waa mid u roon bay'adda u wanaagsan cuntada darajada 'PVC' oo leh geeska ABS, albaab irbad oo dhameystiran ayaa sidoo kale la bixin karaa si loo buuxiyo baahidaada asaliga ah. Hoos u rog-hoos-u-dhig ama bidix-midig waa noocayaga caadiga ah, qufulka iyo nalalka LED-ka ayaa ikhtiyaari ah.
Top Open xabadka Talaajo galaas albaabka
YB Top Open Chest Freezer Glass Door waxay isticmaaleysaa muraayad 4mm sabaynaysa muraayad Low-E muraayad ah, taas oo ah shil kahortaga, cadeyn qarax iyo adkeysiga muraayadda gawaarida. Waxay la kulmi kartaa shuruudaha heerkulka laga bilaabo -30 ℃ ilaa 10 ℃. Qalabka jirku waa mid u roon bay'adda u wanaagsan cuntada darajada 'PVC' oo leh geeska ABS, albaab irbad oo dhameystiran ayaa sidoo kale la bixin karaa si loo buuxiyo baahidaada asaliga ah. Hoos u rog-hoos-u-dhig ama bidix-midig waa noocayaga caadiga ah, qufulka iyo nalalka LED-ka ayaa ikhtiyaari ah.